I-Otter Ski Club e-Village I-Cozy 1 Bedroom- I-Hot Tub - I-Airbnb
I-Otter Ski Club e-Village I-Cozy 1 Bedroom- I-Hot Tub
Conway, New Hampshire, i-United States
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Scott
SICELA UNGABEKELI IZIHLOBO, AMAHOLIDI KANYE NEMPELASONTO KUSEDUZE. Ngisebenzisa lolu hlu ukuze ngigcwalise izikhala lapho lonke ikhaya elinamagumbi angu-8 lingabhukhiwe, ngakho-ke maphakathi nesonto, okungezona ihlobo, kanye nezimpelasonto zomzuzu wokugcina namaholide. Ngokuqondile Esigodini, i-Fmr Ski Club, ibuyiselwe futhi yavuselelwa. Izinyathelo zokuya ezindaweni zokudlela, i-rec ctr, igalofu, i-Village green, isiteshi sesitimela esihle, ikhofi, ukuyothenga, ukushushuluza, i-SACO RIVER, izicathulo zeqhwa, ukuhamba izintaba. I-Kayaking, amapaki okuzijabulisa, ukushushuluza, indawo yendaba, njll konke okuseduze. Umbhede othokomele, oneziko likagesi
Kusukela ngoMeyi 4, kulandela i-NH Order yabasebenzi ababalulekile kanye nenani labantu abasengozini.
Amanani entengo eyekamelo lokulala elingu-1 elinendawo yokungena yangasese futhi uzoba nesikhala uwedwa. AKUKHO IZIVAKASHI EZENGEZIWE< IMICIMBI < IZIFUYO ngaphandle kwemvume.
Ngincamela ukubhuka indlu yonke futhi nginikeze izindawo zokuqasha ezincane ukuze ngivale izikhala. Ngizokucela ukuthi ugcine endaweni yakho futhi uthembele ukuthi awusebenzisi ezinye izingxenye zendlu, akukho zivakashi ezengeziwe, akukho micimbi. SICELA UNGABHALI IZIKHATHI/AMAHOLIDE Aphakeme ZONKE izimpelaviki ezingaphezu kwamaviki angu-2 uphumile. Uzoba nendawo yakho enekhishi elihlome ngokuphelele, ukugeza, igumbi lokuhlala, elondolo. Futhi uyakwazi ukufinyelela egcekeni, amatafula angaphandle, indawo yokushisa, indawo yokucima umlilo kanye nobhavu oshisayo (lesi sikhala esingaphandle/ubhavu oshisayo INGABE KWABELWANE NGENA UMA OKUNYE UKUKHIYELWA KWAMATEMBER EMI-2 NAYO KUQASHWA ngomnyango wayo wangasese).
IZILWANE ZIDINGA UKUVUMELWA NGAPHAMBILI
4.88 · 148 okushiwo abanye
Hlola ezinye izinketho ezise- Conway namaphethelo